Sears – Thet Nandar
Shopping Mall Slideshow: Thet’s trip from Bloomfield, Connecticut, United States to was created by TripAdvisor. See another Connecticut slideshow. Createafree slideshow with music from your travel photos.
State က Sears shopping mall တခုပါ။ ရန်ကုန်က မောလ်လိုပဲ ရုပ်ရှင်ရုံတွေရှိပါတယ်။ made in china ခြင်း အတူတူ ရန်ကုန် မောလ်က ဈေးပိုချိုပါတယ်။ မောလ်ကို ပတ်ကိုကြည့်တယ်။ မုန့်စားတယ်။ ကလေးတွေ ကစားတယ်။
Macy က အထည်တွေကို သူငယ်ချင်းတယောက်က တော်တော်သဘောကျလို့ Macy လည်း ခဏ၀င်ကြည့်တယ်။
Macy မာစီက Marshall မာရှယ်ထက် ဈေးပိုကြီးနေပါသေးတယ်။
အဲဒါထက် china made ခြင်းအတူတူ ဒီက တော်ရိ ရော်ရိ အကျီ ဈေးနှုန်းက ရန်ကုန်က အကောင်းစား အကျီ ဈေးနှုန်းလောက်ကို ရှိနေတော့လည်း 😥
June 21, 2011 Thet Nandar